Sarms Raw Powder Rad140 Speed ​​Androgen Receptor Modulator Sarms 99% သန့်ရှင်းမှု
လျှောက်လွှာကြွက်သားများ ဆုံးရှုံးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။
အလင်းတန်း-sarms bodybuilding ဖြည့်စွက်စာများ၊ sarms steroids
RAD140 သည် အလွန်ထိရောက်သော၊ ပါးစပ် SARM (Selective Androgen Receptor Modulator) သည် လက်ရှိတွင် anabolic နှင့် neuroprotective သက်ရောက်မှုများအတွက် လေ့လာလျက်ရှိသည်။၎င်းသည် ကင်ဆာ၊ စူးရှသောနှင့် နာတာရှည်ဖျားနာမှုနှင့် အသက်အရွယ်ဆိုင်ရာ ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုတို့ကို ကုသရန်အတွက် တီထွင်ထားသည့် တစ်သျှူးများကို ရွေးချယ်သည့် အန်ဒရိုဂျင် receptor (AR) ligands အမျိုးအစားတွင်ဖြစ်သည်။RAD140 ၏ မကြာသေးမီက သုတေသနပြုချက်သည် သာလွန်ပိန်ပါးပါးတစ်ရှူးရွေးချယ်နိုင်မှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နေသော SARM ဒြပ်ပေါင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက androgenic ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို လျော့ကျစေသည်။
ဤဒြပ်ပေါင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည် neuroprotection ကိုလည်းလေ့လာနေပါသည်;အာရုံကြောကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်စပ်သော အာရုံကြောကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်စပ်သော endogenous အန်ဒရိုဂျင်၏ အရေးကြီးသော အာရုံကြောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး apoptotic စော်ကားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆဲလ်သေများကို လျှော့ချရာတွင် testosterone ကဲ့သို့ ထိရောက်မှုရှိစေရန်၊လက်ရှိသုတေသနတွင် ကျန်ရှိသောတစ်သျှူးများကိုရွေးချယ်ထားစဉ်တွင် ပိန်သောထုထည်ကိုတိုးလာစေသည့်ပါးစပ် SARM ကို အလွယ်တကူဆေးထိုးရန် လွယ်ကူသောအသံထွက်ရှိသော အာရုံကြောကာကွယ်မှုဂုဏ်သတ္တိများ Myotrophic နှင့် neuroregeneration သုတေသနဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူ သုတေသနအတွက် ထပ်လောင်းတန်ဖိုး။
SARM RAD140 ရနိုင်သောအများဆုံး anabolic ရွေးချယ်ထားသော androgen receptor modulator ။
ထုတ်ကုန် RAD-140 CAS နံပါတ် 1182367-47-0
အရေအတွက် 2KG Man.date 2016-09-02
စမ်းသပ်စံ အိမ်တွင်းအရည်အသွေးစံ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် နှစ်
ပစ္စည်းများ သတ်မှတ်ချက်များ ရလဒ်များ
အသွင်အပြင် အဖြူမှုန့် အဖြူမှုန့်
(HPLC) ဆန်းစစ်ချက် ≥99.0% 99.4%
အခြောက်ခံခြင်းတွင် ဆုံးရှုံးမှု ≤1.0% 0.5%
နိဂုံး- ထုတ်ကုန်သည် အိမ်တွင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်။
ထုတ်ဝေသူ- Ruhui Zhu Qing Miao မှ စစ်ဆေးခဲ့သည်။ လေ့လာသူ- Zixuan Liu
RAD 140 SARM ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
Cambridge အခြေစိုက် ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Radius ၏ အဆိုအရ အစွမ်းထက်သော၊ ပါးစပ်ဖြင့် ဇီဝရရှိနိုင်ပြီး nonsteroidal RAD 140 SARM သည် ခန္ဓာကိုယ်တစ်သျှူးများရှိ ဟော်မုန်း receptors များသည် Testosterone ပမာဏကို ကောင်းကောင်းရရှိနေသကဲ့သို့ အလားတူလုပ်ဆောင်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ prohormones နှင့် anabolic steroids များဖြင့် စက်ဘီးစီးနေသကဲ့သို့ မလိုလားအပ်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို အနုတ်လက္ခဏာဆောင်ပါသည်။
ထို့အပြင်၊ လက်တွေ့လေ့လာမှုများကလည်း RAD 140 SARM တွင် အခြားသော အကျိုးကျေးဇူးအချို့လည်း ရှိကြောင်း ပြသထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခဏအတွင်း ပိုမိုသေချာစွာ ဆွေးနွေးပါမည်။
anabolic steroid နှင့် prohormone စက်ဝန်းရှိခြင်းကဲ့သို့ RAD 140 SARM ကို သင်အသုံးပြုသောအခါတွင် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများအတွင်း အရှိန်၊ သက်လုံနှင့် ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
အချိန်တိုတိုအတွင်း အကျိုးကျေးဇူးများ ပိုမိုရရှိစေရန် ကူညီပေးသည့် ကြွက်သားတစ်ရှူးများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာတည်ဆောက်ပါ။
RAD 140 ကို ဘယ်လိုယူမလဲ။
RAD140 တွင် androgenic ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝမရှိသောကြောင့် ဆန္ဒရှိပါက အမျိုးသမီးများသည် ၎င်းအား virilization ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုတွင် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ၎င်းအား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သို့မဟုတ် နို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုရန် ဘေးကင်းကြောင်း သက်သေပြထားခြင်းမရှိပါ။
RAD 140 ကို သင်လိုအပ်သည့်အပေါ်မူတည်၍ တစ်နေ့လျှင် 20 သို့မဟုတ် 30mg ဖြင့်သောက်နိုင်သည်။အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤထက်နည်းအောင်ယူရန် လုံးဝဖြစ်နိုင်သော်လည်း များများယူလေ၊ ရလဒ်များ ပိုမိုမြင်နိုင်လေဖြစ်သည်။30mg အထိ ဆေးသောက်ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ဆေးသည် အလွန်တိုတောင်းသော သက်တမ်းတစ်ဝက်ရှိပြီး ၎င်းကို နေ့တိုင်းသောက်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ဒါတောင် သင့်စက်ဝန်းကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ 12 ပတ်ထက် ပိုမယူသင့်ပါဘူး။ဤ SARM သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အရည်ပုံစံဖြင့် ရနိုင်ပြီး ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် ၎င်းကို သင့်ပါးစပ်ထဲသို့ ထိုးထည့်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်းကို ဖျော်ရည်အနည်းငယ်ဖြင့် ညှစ်ထုတ်လိုပေမည်။ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်ပါးစပ်အောက်မှာ ဒါမှမဟုတ် သင့်လျှာအောက်မှာတောင် သိမ်းထားဖို့ မလိုအပ်ဘဲ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို လျှာနဲ့ မသုံးသင့်ပါဘူး။
Hjtc (Xiamen) Industry Co., Ltd. တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းများ၏ ရှေ့ပြေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။စက်ရုံသည် ဆေးဝါးထုပ်ပိုးခြင်း & Steroids ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အမျိုးအစားအသစ် တင်သွင်းသူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 2008 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် နိုင်ငံရပ်ခြား PhD အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့် Hubei၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ Hubei တွင် အတွေ့အကြုံရှိသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သော စက်ရုံဖြစ်သည်။Biocar သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသက်တာအတွက် Science Companies. ငါတို့သည် အိန္ဒိယတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ပေးသွင်းသူများနှင့်အတူ ရေရှည်လက်တွဲ၍ ထုတ်လုပ်သူ 450 ကျော်နှင့်အတူ တက်ကြွသော ဆေးဝါးပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ အလယ်အလတ်နှင့် ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ ၏ CMO ဝန်ဆောင်မှုကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် CMO ဝန်ဆောင်မှုကို ဦးဆောင်သူအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာစေရန် ကတိပြုပါသည်။ နှင့် China. ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ထုတ်ကုန်များကို တန်ဖိုးမြင့်မြင့် အရည်အသွေးနှင့် အထိရောက်ဆုံး အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းဖြင့် စျေးကွက်သို့ ပို့ဆောင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပို့ကုန်များသည် ဘဏ်ခွဲများ၊ လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များမှတဆင့် ဥရောပ၊ မြောက်အမေရိက၊ အာရှ၊ အာရှ၊ ၊ South America နှင့် MEA ။ကျွန်ုပ်တို့၏ အာရုံစိုက်မှုသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပါတနာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆေးဝါးလုပ်ငန်းအတွက် တန်ဖိုးထည့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ယခင်- ကြွက်သားများ LGD4033 Safe Pass ရရှိခြင်းအတွက် Ligandrol CasNO.1165910-22-4 Sarms Raw Powder
နောက်တစ်ခု: RAD140 (Tesolone) ကြွက်သားခံနိုင်ရည်ကို တိုးလာစေရန်အတွက် အလွန်ထိရောက်သော လက်နက်များ CAS:118237-47-0
ကုန်ကြမ်း Prohormones Steroids